ဖုတ်ကောင်များသည် Linux တွင်မ run ပါ၊ | Linux မှ
ဖုတ်ကောင်များသည် Linux တွင်မ run ပါ၊
nano | | GNU / Linux များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, NOTICIAS
ငါဖတ်နေကြပြီ CHW သင်ရုံအောင်မြင်ခဲ့အကြောင်းဆောင်းပါး အခင်အရှင် ၏ဆိပ်ကမ်းနှင့်အတူ Linux မှာ4Dead2ကျန်ခဲ့တယ်။
အရာကတော့မကြာသေးမီကသူတို့အောင်မြင်စွာဂိမ်းဆိပ်ကမ်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်၊6FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်များ) port အတွက်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မှာပြီးပြည့်စုံသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်ရန် deign မပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုက ၆ FPS နဲ့ကောင်းတယ်။
၎င်းကိုရရှိပြီးသည်နှင့်သူတို့သည်ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပြေးကိုတစ် ဦး နှင့်အတူ pc အပေါ်ထုတ်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် Intel Core i7 3930k, NVIDIA GeForce GTX 680, 32GB RAM, xD ကို run ရန် Slitaz လိုအပ်သောစက်များ၏ ...
OpenGL API နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းအပေါ်လုပ်ဆောင်ပါ
ပထမအဆင့်နှစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်တတိယအချက်သည်၎င်းတို့အပေါ်မှီခိုခြင်းမဟုတ်ဘဲယာဉ်မောင်းပိုင်ရှင်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော် Valve ၏အင်ဂျင်နီယာများအားချက်ချင်းလက်ငင်းဝယ်ယူရန်မှာ၎င်းသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ AMD, Intel နှင့် Nvidia လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စကားများအရအကောင်းဆုံးသောသဘောထားနှင့်တုန့်ပြန်မှုပြုခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီသုံးခု၏မောင်းနှင်သူများတွင်အမှားအယွင်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်မြန်ခဲ့သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်ရလဒ်များကိုရရှိစေသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Windows7servipack 1 64 bits တွင် L4D2 သို့ပြေးခဲ့သည် 276.6 FPSငါဆိုလိုတာကသုညနဲ့နောက်ကျတဲ့ Gamer တိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ Ubuntu 12.04 တွင် 32 bit, optimization မပါဘဲ6FPS ... ပြီးနောက်တွင်: 315 FPS! ... Boom ဦး ခေါင်း!
ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုပြသတယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ် OpenGL Linux ဂိမ်းများကိုအလွန်မြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး၎င်းအတွက်စီးပွားဖြစ် Linux drivers များသည်အစစ်အမှန်အလားအလာများရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ဖုတ်ကောင်များသည် Linux တွင်မ run ပါ၊
ဗီဒီယိုချစ်ပ်များကိုတီထွင်သောကုမ္ပဏီများ၏ထူးခြားသောကြွေးမြီမှာသူတို့၏ဒရိုင်ဘာများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Intel သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ကတိက ၀ တ်ပြုသော်လည်း၎င်းင်း၏ Windows drivers များသည် Linux ရှိသူများထက်သာလွန်သည်။ ယုတ်ညံ့သောအခြေအနေများနှင့်အနှီးများတွင်ပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခု၊ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်တစ်သက်တာ၏ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည် ...... လူကြီးလူကောင်း၊ အကယ်၍ ဘက်ထရီများမထည့်ပါက၎င်းတို့သည်အခြားအရာများနှင့်လည်းမစဉ်းစားပါ။ လုပ်နိုင်တယ်
ငါအနှစ်သက်ဆုံးက ... ဒီဒရိုင်ဘာဟာပြေးရန် Slitaz ထက်မကလိုတယ် ... hahahahaha
Linux သုံးစွဲသူ (@taregon) ဟုသူကပြောသည်
hahaha အလွန်ကောင်းသောလေ့လာရေး xD
Linux User (@taregon) ကိုစာပြန်ပါ။
ဒီဟာကလူတိုင်းအတွက်ကောင်းပါတယ်။ Linux မှာဒီလိုအမြန်နှုန်းနဲ့ပြေးတဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့တခြား operating systems တွေဟာ Gamers လို့ခေါ်တဲ့စျေးကွက်ဝေစုသေးသေးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးကျန်နေလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။ သေချာတာပေါ့၊ မှားမှာကိုကြောက်စရာမလိုဘဲ၊ ဂိမ်းအသစ်တွေအတွက်ပလက်ဖောင်းအားလုံးမှာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဂိမ်းတွေလာနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
ခြားနားချက်မှာပိုမိုကြီးမားသည်။ Windows တွင် ၂၇၀.၆ ဖြစ်သည်
45 FPS ခြားနားချက်နှင့်သူတို့၏ဘလော့ဂ်တွင်သူတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းယာဉ်မောင်းသူများသည်အမြဲတမ်းတူညီကြသည်၊ nVidia နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
အမှန်တရားကတော့သူတို့မအောင်မြင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုစီမံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ သို့တိုင်၎င်း PC နှင့်အတူ 500 fps နှုန်းဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံမှန်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် 60 fps နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလောင်းအစားများအတွက် Valve ရှိလူများထံသို့ Kudos ။ ဤအရာအားလုံးသည် Linus ၏ Fakiu သို့ပေါင်းထည့်ပြီး Hardware နှင့် Linux developer များအကြားတွင်ခေတ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဂိမ်းများအတွက် Linux အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာအချက်မှာ developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဂိမ်းများကို Kernel နှင့် APIs များနှင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမပါဘဲအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဘလော့ဂ်တွင်သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့် OpenGL အောက်ရှိ L4D ဗားရှင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုကြလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပေးသည်။
ပြီးတော့သူတို့က 32-bit Ubuntu ကိုသုံးပြီး 7-bit W64 ကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါက 64-bit Arch xD မှာဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတာငါမစဉ်းစားချင်ဘူး။
... ပိုပိုပြီးဖောင်းပွ ...
HOMER TURON ဟုသူကပြောသည်
Micro Intel i32 (သို့) AMD X7 နှင့်အတူ 8 GB Ram ကိုသင်၏ PC တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်များရှိပါသလား။
HOMERO TURON အားစာပြန်ပါ
ဂိမ်းကအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်မည်ဘယ်မှာသင် download လုပ်နိုင်သည်
Windows သည် Steam သည် Linux ပေါ်တွင်ပိုမိုမြန်သည်